SEHATRY NY ANKIZY - Dian'ny fiainako
NY DIATONGOTRY NY FIAINAKO
Nijanona kely fotoana fohy nandinika ny diantongom-piainako teo amin’ny torapasika aho.
Dia tsinjoko teo ireo dian-tongotro mitomandavana hatrizay fotoana niainako izay.
Hitako ireo diantongotro mahitsy famindra sy milamina aoka izany.Izay marik’ireo hafaliana, fahombiazana ary fanantenana rehetra nolalovako hatry ny fahazazako ka hatramin’izao.
Etsy ankilany anefa , tsikaritro koa ireo dian-tongotra hafa toa mibolila sy mikorontana be ihany.
Izay nanamarika ireo fahoriana, tsy fahombiazana ary fahadisoam-panantenana nosedraiko matetika.Fa ny tena nahagaga ahy , dia indreo misy diantongotra roa hafa koa avy eo andaniny roa amin’ny dian-tongotro havia sy havanana.
Nanontany tena aho ary very hevitra : " Iza no tompon’ireo dian-tongotra ireo nefa toa izaho irery no namakivaky ity toram-pasika midadasika "?
Dia naheno feo nibitsika aho hoe : "Dian-tongotry ny mpiaro anao ireo , izay tsy nandao anao fa teo anilanao foana na tamin’ny hafaliana na tamin’ny fahoriana dia ilay Jesoa Tomponao".
Velon-tsiky aho ary nahatsapa fa hay tsy miady irery fa ao tokoa ilay Mpiandry tsara izay tsy mahafoy ahy na dia izaho aza no toa manadino azy indraindray.
Niova tomany vetivety anefa ilay tsiky teo satria hitako tampoka fa teo amin'ny toram-pasika tena mitomandavana dia tsy nisy afa-tsy ny dian-tongotro roa samirery no tazako. Nefa nahagaga ahy fa somary lehibe kokoa noho ny faladiako . Tsy hitako intsony ilay dian-tongotra roa fanampiny an’ny Tompo ka nitomany mafy aho ary nifona taminy mba tsy hilaozany amin’ny mbola ho diako manaraka.
Dia naheno feo nibitsika indray aho nilaza hoe: "Aza mitomany ry zanako tsy foiko fa tsy dian-tongotrao ireo dian-tongotra roa sisa hitanao eo amin’ny tora-pasika ireo fa ny dian-tongotro izaho Tomponao. Tamin’ireo fotoana mangidy indrindra tamin’ny fiainanao dia notrotroiko ianao".
“Ny Tompo anie homba anao mandrakariva"
Tetsy sy teroa 22 marsa 2014